गौरीकला रोकाय हत्याको रहस्य! तीन जना सार्वजनिक – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः १५ चैत्र २०७४, बिहीबार ०७:५१ March 29, 2018 हातेमालो संवाददाता
सुर्खेत-सुर्खेतमा एसईई परीक्षामा सहभागी भइरहेकी पञ्चपुरी नगरपालिका –३, की गौरीकला रोकायको हत्यामा संलग्न ट्राफिक प्रहरीसहित तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रहरीले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दैलेख घर भई इलाका प्रहरी कार्यालय बावियाचौरमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जवान हरिप्रसाद कोइराला, पञ्चपुरी नगरपालिका –८, माझीगाउँका लक्ष्मीप्रसाद बास्तोला र खुमप्रसाद बास्तोलालाई सार्वजनिक गरेको हो ।
गौरीकलाको मोटरसाइकलबाट खसेर टाउकोमा चोट लागेर ज्यान गएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
गौरीकला किन गइन् मोटरसाइकलमा ?
प्रहरी जवान कोइरालाले आफूलाई ‘केटी मिलाइदिन’ भनेकाले आफूले गौरीकलालाई बोलाएर भेट्टाई दिएको लक्ष्मी बास्तोलाले बयान दिएका छन् । गौरीकलाको मोबाइलको कल रेकर्डबाट प्रहरीले लक्ष्मीप्रसाद बास्तोलालाई पक्राउ गरेको थियो ।
लक्ष्मीप्रसादले गौरीकलालाई दिउसो नै कोइरालासँग भेट्टाई दिएका थिए । उनीहरु ३ जनाले दिउँसो नै जंगलमा गएर खाजा पनि खाएका थिए । लक्ष्मी बास्कोटा र प्रहरी जवान हरिप्रसाद कोइरालाले रक्सी पनि पिएका थिए ।
त्यसपछि गौरीकला पढ्न भनेर कोठा फर्किन् । लक्ष्मी र हरिप्रसाद साथी भाइसँगै खानपिन गरेर बसे ।
राति १२ बजेतिर लक्ष्मीले पञ्चपुरी नगरपालिका –५ कै बाबियाचौरमा डेरा लिएर बसेकी गौरीकलालाई फोन गरेर बाहिर बोलाए । लक्ष्मी मोटरसाइकल लिएर उनको डेरा बाहिर पुगेका थिए । त्यसपछि गौरीकलालाई मोटरसाइकलको बीचमा राखेर राति साढे १२ बजेतिर लक्ष्मी र हरिप्रसाद खेल मैदानसँगैको जंगलतिर लगे । मैदानको छेउमा बाइक रोकियो, कोइराला गौरीकलालाई लिएर मैदानछेउको झाडीमा गए । लक्ष्मी मैदानकै छेउमा बाइक रोकेर उनीहरुको पर्खाईमा बसे ।
हरिप्रसाद र गौरीकला फर्केपछि जसरी गएका थिए त्यसैगरी उनीहरु तीनै जना एउटै मोटरसाइकलमा फर्किए । इलाका प्रहरी कार्यालय आएपछि कोइराला ओर्लिए । लक्ष्मीले गौरीकलालाई उनको कोठामा पु¥याउँदै थिए । गौरीकला मोटरसाइकलबाट खसिन् । उनी बेहोस भइन् । लक्ष्मीले दाजु खुमप्रसादलाई बोलाए । दुई जनाले मिलेर गौरीकलालाई बेहोसी अवस्थामा उनको कोठामा लगेर सुताई दिए, र ढोका तानेर आफूहरु घर गएको बयान उनीहरुले दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।‘मोटरसाइकलबाट खसेर नै उनको ज्यान गएको आशंका छ’ पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उमाप्रसाद चुर्तर्वेदीले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । पोष्टमार्टमको रिर्पोट आइसकेपछि र थप अनुसन्धानपछि थप कुरा खुल्दै जान्छन् ।’ प्रहरीले राति एक बजेपछि गौरीकलाको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
गौरीकलाको रगत लागेको लक्ष्मी बास्तोलाको सर्ट बरामद
प्रहरीले गौरीकलाको रगत लागेको लक्ष्मी बास्तालोको सर्ट पनि वरामत गरेको छ । यस्तै मोटरसाइकल लाइसेन्स, आरोपीहरुले प्रयोग गरेको मोबाइल सेटहरु नियन्त्रणमा लिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परेकाले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको प्रमुख चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पोष्टमार्टमको विस्तृतत विवरण आउन ढिलाई हुने भएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । मृतकको पोष्टमार्टमपछि परिवारलाई शव बुुझाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परीक्षा दिन जाने बेलासम्म नउठेपछि …
पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालय पञ्चपुरी – ५, बावियाचौर केन्द्रबाट एसईईको परीक्षा दिइरहेकी गौरीकला मंगलबार बिहान आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । एसईईको परीक्षामा सहभागी हुन गौरीकला पञ्चपुरी नगरपालिका –५ कै बाबियाचौरमा डेरा लिएर बसेकी थिइन् ।
बिहान परीक्षा दिन जाने क्रममा अबेरसम्म उनी नउठेपछि कोठामा गएर हेर्दा उनी मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनी सूर्यप्रकाश मावि पलैटे सालकोटमा अध्ययरत थिइन् । प्राविधिक, स्वयम्सेविका लगायत स्थानीयको सहभागिता थियो ।
नेपालमा कुल काेराेना सङ्क्रमितको संख्या दुई लाख १२ हजार ९१७ पुग्याे
नरैनापुरमा स्वास्थ्य शिविर,७ सय बढीले चेक गराए